Yuusuf Garaad;"Aniguba Mar Baan Dhacay!!"
Saturday September 19, 2020 - 21:13:40 in Wararka by Mogadishu Times
Yuusuf Garaad Cumar oo ka mid ah ruugcadaaga saxaafadda ee dalka Soomaaliya isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowlada Soomaaliya ayaa boggiisa facebook waxa uu ku soo bandhigey sheeko ku saabsan mar uu ku dhacay fasalka labaad ee dugsiga h
Yuusuf Garaad Cumar oo ka mid ah ruugcadaaga saxaafadda ee dalka Soomaaliya isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowlada Soomaaliya ayaa boggiisa facebook waxa uu ku soo bandhigey sheeko ku saabsan mar uu ku dhacay fasalka labaad ee dugsiga hoose iyo sida ay ugu noqotay cashar uu ku dhisay mustaqbalkiisa. Qoraalka Yusuf Garaad ayaa ku bilowday sidan; Markii aan arkay natiijada imtixaanka Dugsiyada, aad ayaan u dhibsaday ardayda faraha badan ee aan gudbin. Dow ma aha in xukun ku saleysan mala awaal aan ku rido, ama aan canaan kala dul dhaco mid ka mid ah dhinacyada faraha badan, ee toos ama si dadban u yeelan kara mas'uuliyadda mar-fashilka.
Shahaaddada Fasalka labaad waxaan keydinayay ilaa aan Dugsiga Sare dhammeystay. Waxay horseed iigu noqotay khibrad aan marar badan ka shidaal qaatay oo dhaqan ii noqotay. Waa in sannad kasta hal maaddo ama dhowr aan
ugu sarreeyo fasalka ama iskuulka oo dhan. Ama in aan maddooyinka oo dhan marka la isku daro dhibcahooda aan anigu kuwa ugu badan haysto.
Markii aan u sheegay in aan Jaamacadda dhigto, wuxuu markiiba i weydiiyay Kulliyadda aan galay. Luqadaha marka aan dhahay wuxuu iigu jawaabay "waad tacaddisay.” Wuxuu raaciyay "Maxaad Xisaabta uga hartay!”